Uthotho lweEcho 3 luza kubonisa umdlali weqonga uLuka Evans | Ndisuka mac
A phakathi konyaka ophelileyo, sithethe ngenye yeeprojekthi ezahlukeneyo ezazisenziwa ngu-Apple ukwandisa umxholo okhoyo kwiqonga levidiyo. Ndithetha ngothotho lwamanyathelo i-Echo 3, uthotho olukhokelwa nguMark Goal, umbhali wefilimu kumhlaba wobundlobongela awathi uKathryn Bigelow waba Umlawuli wokuqala wefilimu ukufumana iOscar kwiHollywood Academy.
Iindaba zamva ezinxulumene nale projekthi zivela kupapasho Ezahlukahlukeneyo. Ngokweli phephancwadi, uthotho lwe-10-episode Echo 3 izakudlalwa ngumlingisi uLuke Evans njengomntu ophambili kwindima kaBambi (igama elinomdla). Olu ngcelele iya kudutyulwa ngesiNgesi nangeSpanish kwaye okwangoku kuyaziwa ukuba ungawuphi umhla wokukhutshwa kwi-Apple TV +.
I-Echo 3 iya kusetwa eMzantsi Melika kwaye ilandele u-Amber Chesborough, usosayensi osisilumko okrelekrele oye waba liliso lasekunene losapho. Xa enyamalala kumda ophakathi kweColombia neVenezuela, umntakwabo uBambi (uLuka Evans) kunye nomyeni wakhe (bobabini benamava omkhosi kunye nexesha elidlulileyo), bathathe isigqibo Ukuhamba ukumfumana kwidrama enemvelaphi eyimfihlo yemfazwe.
U-Luke Evans unjalo Waziwa ngokudlala kwakhe kumdlalo bhanyabhanya Ubuhle nerhamncwa, IiMusketeers ezi-3 kunye noMilla Jovovich, uCristoph Waltz, uOrlando Bloom kunye noMad Mikkelsen phakathi kwabanye ukongeza ifilimu Ongafiyo kunye noStephen Dorff noMickey Rourke kwaye bathathe inxaxheba kwi de Ngokukhawuleza nangomsindo 6 nakwitrilogy Hobbit.
UMark Boal akazukuyenza kuphela imisebenzi yomlawuli, kodwa naye ikwathatha inxaxheba kwimveliso yolawulo kunye noJason Horwitch. Kwimisebenzi yokuvelisa sifumana uPeter Traugott, uMark Boal, uOmri Givon, uEitan Mansuri phakathi kwabanye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Uthotho lwe-Echo 3 luza kubonisa umdlali weqonga uLuka Evans